ILoft yeSitudiyo yanamhlanje ★ Hamba uye kwiDolophu endala kunye neeVenkile
Indlu engasemva yonke sinombuki zindwendwe onguMatt & Elizabeth
Indlu yendwendwe esandula ukulungiswa kwi-350 sq. Isitudiyo sethu sibekwe embindini sinofikelelo olulula kwi-US-101 kwaye kumgama wokuhamba ukuya kwiDolophu eNdala yase-Eureka, iivenkile, kunye neendawo zokutyela, kunye nokuqhuba okufutshane ukuya eArcata naseHumboldt State University. Siyakumema ukuba uphumle kwaye uhlale kwisitudiyo sethu ngelixa uphonononga enye yezacholo zaseCalifornia! Isitudiyo sethu silungele ukubaleka izibini, iintsapho ezincinci, kunye nabahambi beshishini.
**Sithathe amanyathelo okhuseleko awongezelelweyo ngexesha lobhubhani we-coronavirus kubandakanya nokucoca ngokucokisekileyo yonke imiphezulu kunye nokubonelela ngesihluzo somoya se-HEPA.**
Istudiyo sethu sisanda kulungiswa kwaye yonke into intsha kwaye ikumgangatho wezobugcisa. Siyile istudiyo sicinga ngawe. Senze indawo elula eyindawo egqibeleleyo yokurhoxa ukusuka kwimini yokujonga iRedwoods yethu entle kunye nonxweme.
Siyazingca ngokubonisa imizobo eludongeni evela kwigcisa le-surf lasekhaya kunye nomhlobo, uMat Beard.
• Indawo yokuhlala engundoqo inesilingi eziveziweyo ezinemiqadi yeplanga eveziweyo, umgangatho okhutshiweyo we-bamboo, indawo yomlilo epholileyo yombane, kunye nesofa eguquka ibe yibhedi yogwebu yenkumbulo epheleleyo.
• Ikhitshi ibandakanya yonke into onokuyilindela kwikhitshi elilula eligcwele ngokupheleleyo kuquka nesitishi sekofu egalelwe ngaphezulu! Ukuba kukho into oyifunayo elahlekileyo, vele ubuze kwaye singayifumana.
• Ilitye elinqabileyo lestudiyo sethu yindawo yokulala epholileyo ejonge eyona ndawo iphambili yokuhlala. I-loft ibandakanya i-queen memory foam umatrasi kwaye ifikeleleka ngeleli elomeleleyo, ayifanelekanga kubantwana abangaphantsi kweminyaka emi-6 kunye neendwendwe ezinenkxalabo yokufikeleleka.
• Igumbi lokuhlambela libandakanya umgangatho ongatyibilikiyo wethayile, ishawa yesitali, kunye newasha epakishweyo kunye nesomisi. Uxhotyiswe ngesifudumezi-manzi esifunekayo, awusoze uphelelwe ngamanzi ashushu!
4.99 · Izimvo eziyi-565
Bonisa iingxelo zokuhlola eziyi565
Isitudiyo sethu sikumbindi wedolophu yase-Eureka kumantla e-Humboldt County. Isitudiyo simi kwiibhloko ezili-15 ukusuka kwindawo yasemanzini yaseHumboldt Bay, umgama omfutshane wokuya kwiDolophu eNdala, iivenkile, kunye neeresityu, kunye nemizuzu emi-5 yokuqhuba ukuya esibhedlele. I-Eureka ikwi-US-101 kunxweme lwaseHumboldt Bay, iikhilomitha ezingama-270 kumntla weSan Francisco kunye neekhilomitha ezili-100 kumzantsi womda we-Oregon. I-Eureka yaziwa ngamazibuko ayo okuloba, amakhaya embali yeVictorian, kunye neRedwoods entle. Downtown Arcata kunye Humboldt State University zilula 10-minute drive emntla kwi US-101. Kwisithuba seyure yokuqhuba, zininzi iindawo zokuphonononga kunye nokufumanisa ~ iilwandle ezintle, iRedwoods eyoyikekayo, imilambo ezukileyo, nokunye okuninzi!
Umbuki zindwendwe ngu- Matt & Elizabeth
Njengoko kufuneka. Sihlala kwipropathi kwaye sifowuna nje okanye sithumela umyalezo kude!
UMatt & Elizabeth yi-Superhost